Kooxda Juventuse Oo 14 Milyan Dul-Dhigtay Mascherano
Kooxda Juventuse Oo 14 Milyan Dul-Dhigtay Mascherano 0 August 04, 2015 in Articles by Wariye Dalmar Visits: 593
Xiddiga u ciyaara kooxda Barcelona ee waddanka Spain ayaa waxaa soo dalbatay Kooxda Juventus ee waddanka Talyaaniga, iyadoo dooneysa inay soo iibsato Javier Mascherano,si uu badal ugu noqdo ciyaaryahanka Sami Khedira oo dhaawacmay.
Xiddiga u ciyaara kooxda Barcelona ee waddanka Spain ayaa waxaa soo dalbatay Kooxda Juventus ee waddanka Talyaaniga, iyadoo dooneysa inay soo iibsato Javier Mascherano,si uu badal ugu noqdo ciyaaryahanka Sami Khedira oo dhaawacmay. Barnaamijka Ciyaaraha
Hargeysa- (SLL)- Xiddiga u ciyaara kooxda Barcelona ee waddanka Spain ayaa waxaa soo dalbatay Kooxda Juventus ee waddanka Talyaaniga, iyadoo dooneysa inay soo iibsato Javier Mascherano,si uu badal ugu noqdo ciyaaryahanka Sami Khedira oo dhaawacmay.
Jariirada Tuttosport ayaa qortay in Mascherano uu doonaayo in ciyaarihiisa uu ku soo gabagabeeyo Serie-da dalk Talyaaniga maadaama uu in badan kasoo ciyaaray horyaalada kala ah Premier League iyo La Liga,sidaasi darteed ayay Juve ku dalbatay.
Kooxda lagu naaneeso the Old Lady ee Juventuuse ayaa waxa ay rabtaa in 31-sano jirkan ay kaga maaranto Khedira oo naadiga dhaawac ahaan kaga maqnaan doono mudo aan ka yareyn laba bilood.
Mascherano ayaa lagu qiimeeyaa in kooxda Juve ay ku soo iibsan doonto qiimo u dhaxeeya €10-15m, balse kooxda Barcelona ayay ku adagtay in ay iska iibiso laacibkan.
xafiiiska Hargeysa, Somaliland. No Comments yet... Print